विलासी सवारीको सौख - बजार - साप्ताहिक
कार, जिप, भ्यान दर्ता पछिल्लो १० वर्षमा
०६५/०६६— ६, ८५७
०६६/०६७— १२, २६८
०६७/०६८— ८, ५१०
०६८/०६९— ८, ७११
०६९/०७०— ९, ५९५
०७०/०७१— ११, ३७२
०७१/०७२— १३, ५६०
एक समय थियो, नेपाली धनाढ्य तथा हाइप्रोफाइलहरूका लागि सौखअनुसारका ब्रान्डका गाडी उपलब्ध थिएनन् । काठमाडौंका सडकमा हुइँकिने ल्याडरोभर, पजेरो तथा प्राडोमा हाइप्रोफाइल तथा धनीहरूको ‘स्टाटस’ झल्किन्थ्यो । अहिले पहिलेको जस्तो प्राडो, पजेरोजस्ता एकै प्रकारका गाडीलाई स्टाटस सिम्बोलका रूपमा रोज्नुपर्ने बाध्यता छैन ।
कोही बाध्यता त कोही रहरले विश्वबजारका चर्चित कम्पनीका महँगा विलासी गाडीलाई ‘स्टाटस सिम्बोल’का रूपमा आफ्नो बनाउन थालेका छन् । गाडीका कतिपय सौखिन त फरक ब्रान्ड र आकर्षक लुक्स भएका गाडीमार्फत अरुको ध्यान तान्न चाहन्छन् । त्यसैले नेपालमा सडकको चरम दुरावस्थाका बाबजुद पनि हुनेखाने, हाइप्रोफाइल तथा धनीहरू करोडौं रुपैयाँका चिल्ला गाडीमा हुइँकिन्छन् । प्रतिस्पर्धी विश्वबजार, विलासी तथा विश्वस्तरीय ब्रान्डको सहज उपलब्धता एवं विविधताजस्ता कारण ‘स्टाटस सिम्बोल’मा समेत विविधता देखिन थालेको छ ।
विभिन्न अटोमोबाइल कम्पनीहरूले नाम चलेका विदेशी ब्रान्डका महँगा गाडीहरू नेपाली बजारमा भित्र्याउन थालेका छन् । गोल्छा समूहले फ्रान्सेली ब्रान्ड प्युजो, एमएडब्लूले अमेरिकन जिप, पारामाउन्ट मोटर्सले ब्रिटिस ब्रान्ड एमजीजस्ता नयाँ ब्रान्डका महँगा गाडी नेपाली बजारमा उपलब्ध गराइरहेका छन् । अहिले काठमाडौंका सडकमा ज्यागुअर, आउडी, बीएमडब्ल्यु, हमर, फरारी, बेन्ट्लेका महँगा गाडीहरूसमेत कुदिरहेका देखिन्छन् । मर्सिडिज बेन्ज, रेनल्ट, फोर्ड, भक्सवागन, टोयोटा, साङयोङजस्ता महँगा ब्रान्डका गाडीहरूसमेत नेपाली सडक नापिरहेका छन् ।
हुन्डाई, मारुती सुजुकी, महिन्द्रा, किया, निसान, सुवारु, माज्दा आदि इन्ट्री लेभलदेखि करोडौं रुपैयाँसम्मका कार बेच्ने लोकप्रिय कम्पनी हुन् । नेपालीहरूको रुचि महँगा गाडीमा बढ्नुको कारण के हो ? गाडी व्यवसायीहरूको संस्था नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका महासचिव कृष्णप्रसाद दुलाल कर्पोरेट कल्चरका कारण महँगा गाडी खरिद गर्नेहरूको संख्या बढेको मान्छन् । ‘हामीकहाँ अहिले कर्पोरेट कल्चर बढेको छ,’ दुलाल भन्छन्, ‘व्यवसायीहरूले नै प्राय: महँगा गाडी खरिद गर्दै आएका छन् ।’ कम्पनी वा व्यवसायका नाममा गाडी किन्दा केही छुट पाइने भएकाले पनि व्यवसायीहरू यसतर्फ आकर्षित भएका पाइन्छन् । कुल सवारीमध्ये ५ प्रतिशतको हाराहारीमा महँगा गाडीमा सयर गर्नेहरू छन्, जसमा उद्योगी/व्यवसायी, बैंकका सिइओहरू, घरजग्गा कारोबारी तथा म्यानपावरवालाहरूको बाहुल्य छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सवारी साधन करमा भारी वृद्धि गरेपछि नेपालीहरूमा महँगा गाडीको प्रयोगमा कमी आएको केही व्यवसायीको दाबी छ । नेपालका महँगा कार विक्रेतामध्ये एक किशोर श्रेष्ठ भने यसपाली करमा भारी वृद्धि गरिएपछि महँगा गाडी ल्याउनै नसकिएको बताउँछन् । यद्यपि हाल चलिरहेको नाडा अटो शोमै करोडौं मूल्य पर्ने महँगा गाडीहरू बिक्रीका लागि राखिएका छन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नाडा अटो शो उद्घाटनका अवसरमा ऋण लिएर गाडी किन्नुभन्दा पैसा कमाएर किन्न आग्रह गरे ।
नाडाका सचिव अनुप बरालका अनुसार अहिले नेपाली बजारमा १० लाख रुपैयाँदेखि पौने ४ करोडसम्मका गाडी उपलब्ध छन् । ‘साढे तीन करोडदेखि पौने चार करोडसम्मका हमर र बीएडब्लू नेपाली बजारमा उपलब्ध हुन थालिसके,’ बराल भन्छन्, ‘एकदमै कम मूल्यको कमर्सियल भेइकल मारुती पिकअप भ्यान १० लाख रुपैयाँमा भित्रिरहेका छन् ।’ व्यक्तिगत रहरका लागि भित्र्याएका गाडी समेत जोड्ने हो भने अहिले नेपाली बजारमा इन्ट्री लेभलका १४–१५ लाख रुपैयाँ पर्ने गाडीदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्मका महँगा गाडी कुदिरहेका छन् ।
नेपालमा सबैभन्दा बढी चलेका गाडीका ब्रान्डमा मारुती सुजुकी तथा हुन्डाई हुन् । राम्रो रिसेल भ्यालु, नेटवर्क, परसेप्सन, पार्टपुर्जाहरूको उपलब्धता, देशभरि सोरुम सन्जालजस्ता कारणले हुन्डाई र सुजुकीले नेपाली अटो बजारमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न सकेका हुन् । फोर्ड, भक्सवागन, टाटा तथा टोयोटाले पनि नेपाली बजारमा राम्रो रेस्पोन्स बटुलिरहेका छन् । तुलनात्मक रूपमा सस्तो एवं सडकमैत्री भएका कारण महिन्द्राका गाडी पनि नेपालमा लोकप्रिय छन् । महिन्द्राका बोलेरो, स्कार्पियोजस्ता गाडी उकालो पनि राम्रोसंग चढ्ने भएकाले नेपालीहरूमाझ लोकप्रिय छन् । केही पारखीहरू भने एलसी खोलेरै भन्सार प्रक्रिया पूरा गरी नेपालमा नभएका महँगा विदेशी गाडी भित्र्याउँछन् । व्यवसायीहरूका अनुसार नेपाली बजारमा ८० प्रतिशत इन्ट्री लेभलका गाडी तथा २० प्रतिशत अन्य गाडी बिक्री हुने गरेका छन्, जसमा हुन्डाईको क्रेटा, सुजुकीको ब्रेजा, फोर्ड इकोस्पोर्ट आदि गाडी बढी बिक्री हुने चारपाङ्ग्रे सवारीमा पर्छन् ।
गाडीको कर बढे पनि गाडी चलाउनेहरूको संख्या निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकअनुसार बितेको २९ वर्षमा नेपालमा दर्ता हुने गाडीको संख्या ३२ लाख २१ हजार ४२ पुगेको छ, जसमध्ये यो अवधिमा विभागमा दर्ता भएका कार, जिप तथा भ्यानको संख्या २ लाख ३७ हजार ६ सय ५८ छ । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ सम्म कार, जिप तथा भ्यान आयातमा २१ दशमलव ८३ प्रतिशतले वृद्धि भएको पाइन्छ । नेपालमा राजस्व बढी तिर्नेमा अटो व्यवसाय तेस्रो स्थानमा छ । नाडाका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद दाहाल अटोमोबाइल बजारको पारदर्शिता, बजार विस्तार, आयस्रोत बढ्नु, क्रयशक्ति बढ्नु, बैंकले ६५ प्रतिशत फाइनान्स गर्नुजस्ता कारणले गाडी चढ्ने नेपालीहरूको संख्या वृद्धि भएको बताउँछन् । ‘अटो लोनमा सहजता, बढ्दो आम्दानी, बजारको विस्तारजस्ता कारणले गाडी चढ्ने नेपालीहरूको संख्या वृद्धि भएको हो,’ दाहाल भन्छन् । यसबाहेक घरजग्गा र सेयर कारोबारमा भएको वृद्धि एवं वैदेशिक रोजगारीसँगै सडक सन्जालको विस्तार पनि गाडी चढ्नेहरूको संख्यामा वृद्धि हुनुको महत्वपूर्ण कारण हो ।
मोटरसाइकलको व्यापार खस्कियो
मध्यवर्गीय नेपालीमाझ लोकप्रिय मोटरसाइकलको बजार भने पछिल्लो वर्ष घटेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा ३ लाख ५४ हजार ७१ बाइक यातायात व्यवस्था विभागमा दर्ता भएका थिए भने ०७४/०७५ मा ३ लाख ४१ हजार ६ सय २३ बाइक मात्र दर्ता भए । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै ३ दशमलव ५ प्रतिशतले कम हो ।
बाइकको बजार घट्नुको कारण के हो त ? व्यवसायीहरूका अनुसार बैंक तथा कर्पोरेट हाउसहरूमा जागिरको अवसरमा भएको वृद्धि, कूटनीतिक नियोग, एनजिओ, आइएनजिओ तथा मल्टीनेसनल कम्पनीहरूको आकर्षक आम्दानी यसका प्रमुख कारण हुन् । अर्कातर्फ बाइक चढ्ने नेपालीहरू बिस्तारै कारतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन्, यद्यपि अहिले पनि महँगा बाइकले समेत आफ्नो बजार विस्तार गरिरहेका छन् । भृकुटीमण्डमा जारी अटो शोमा ४५ लाख रुपैयाँसम्मका बाइक उपलब्ध हुनुलाई त्यसकै परिणाम मान्न सकिन्छ ।